UNWTO Secretary General Sarudzo: Vashanu vakasara uye mimwe mibvunzo ku Executive Council
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » UNWTO Secretary General Sarudzo: Vashanu vakasara uye mimwe mibvunzo ku Executive Council
Nhau Nhau • Belgium Breaking News • Kuputsa Georgia News • Kuputsa Seychelles Nhau • Kuputsa South Korea Nhau • Kuputsa Spain Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa Zimbabwe News • Colombia Breaking News • Interviews • Musangano Weindasitiri Nhau • vanhu • Kutarisirwa • Trending Now
Dai 10, 2017
Sarudzo dzemunyori mukuru weUNWTO mutsva achangosarirwa nemazuva maviri chete uye varikukwikwidza vari kutopinda misangano ye Executive Council paMelia Castilla Hotel kuMadrid. eTN yakakoka vaverengi kuti vape mhinduro yavo uye maonero avo kuti ndiani anofanirwa kutungamira indasitiri yekushanya yepasirese. Muzvinafundo Geoffrey Lipman, Co-muvambi SUNx, uye Mutungamiri International Mubatanidzwa weVashanyi Partner (ICTP) Akapindura.
Saka saka paive nemashanu - Mimwe Mibvunzo kupfuura Mhinduro dzeUNWTO Executive Council paivhota muNew Secretary General neChishanu kuMadrid.
(Pfungwa dzakapihwa naPurofesa Geoffrey Lipman)
Alain St. Ange Akamhanya akashinga kukwira mushandirapamwe weSecretary General weUNWTO. Izvo hazvina kuwira pakukwanisa kwake kana pakuona, asi pachokwadi, kuti mumwe mukwikwidzi anobva kuAfrica, Walter Mzembi ine rutsigiro rweMitezo yeAfrican Union - uye izvo zvaisanganisira nyika yaVaSt Ange yeSeychelles.
Mukupedzisira, chaive chinhu chakatemwa, uye semujaho pawakadzika kuenda kune waya hazvishamise kuti zvimire zvese zvakabuda. Zvinonzwisa tsitsi kuti chiratidzo chaSt Ange pamusoro penyaya dzakaita semamiriro ekunze, kuchengetedzeka kana zvitsuwa zvidiki zvinodiwa, pamwe nehupenyu hwake, zvicharasika.
Asi mumwe haafanire kuita chikanganiso chekuona Mr Mzembi kungofanana nekutamba kwezvematongerwo enyika. Iye mudiki asi akagwinya mune rakaomarara rezvematongerwo enyika. Akaita zvakawanda kumutsiridza mweya, kuoneka, uye mashandiro eZimbabwe Tourism: pamwe nekusimudza mukurumbira pamwe nekubatana kwenyika dzeAfrica kuburikidza nesachigaro wake wenguva refu weUNWTO Commission for Africa. Zvirongwa zvake zveUNWTO zvakanyatsofungidzirwa kuburikidza, kushinga, kuona, uye zvakadaro panguva imwe chete zvine mutsindo muhurongwa hwesangano.
Ndokusaka achipa mukana unokwezva kwazvo. Uye hapana munhu anogona kukahadzika kuti Africa ine huwandu hwayo hukuru hwevanhu vari kubuda pamwe nematambudziko ebudiriro zvaizowedzerwa zvakanyanya.
Anotarisana nevadzivisi vakaoma
Marcio Favilla Mutungamiriri akazvipira wekushanya, achishandira nyika yake seMutevedzeri wegurukota rezvekushanya uyezve seMutungamiriri Executive paUNWTO. Iye murume akanaka anonzwisisa mikana nematambudziko anotarisana nesangano munguva dzinowedzera kusava nechokwadi. Iye ari mukati asi ane akakosha kunze kwekuziva. Chirongwa chake chinoratidza izvi. Kufanana nevaviri vekare Secretary General, anga ari muhutungamiriri hwesangano kwemakore mazhinji. Zvirongwa zvake zvakanaka uye kuzvipira kwake kwakazara. Iye akachengeteka maoko maviri.
The Dho / Vogeler tikiti chimwe chinhu chitsva kusangano - uko vanhu vaviri vakabatana kuzadzisa yavo yega simba nezvinetso sevamiriri. Icho chisina kunaka. Kana iri Carlos Vogeler akangotadza kuwana rutsigiro rwakakosha rwehurumende yake kuti amhanyire basa repamusoro, uye anofukidza dunhu rimwe chete saMarcio Favilla. Uye mukwikwidzi anotungamira Mumiriri Young Shim Dho yakanga isina rutsigiro rwezvematongerwo enyika rwunodiwa kukwidza mushandirapamwe une simba. Saka pfungwa ye2 yeimwe. Chirongwa chavanotsigira ndechekuti chinotarisirwa kuchengetedza zvinhu zvakanaka zvehutongi huripo zvine tarisiro yeramangwana yakasimba - yakarongeka, yakagadzirirwa uye nehunyanzvi yakapihwa.
Iko kune zvakadaro, zvakanaka uye zvisina kunaka nyaya mupfungwa yetikiti kwete munhu - mutsika nemutemo, zera, ruzivo, kuenderana, uye chiyero chevamiriri. Ikozve kune yakaoma nyaya yenzvimbo yeiyo inomira ST-EP chirongwa - izvozvi neKorea nyowani yakavakirwa International Organisation kuitonga.
Asi chokwadi, pano ini ndinofanira kuzivisa kufarira, kuve nepamuviri ST-EP, pamwe isati yasvika nguva yayo, seyiyera, MDG mota yekuendesa, mumweya weSDG yanhasi … ..
Chekupedzisira pane varipo vasingazivikanwe.
Ambassador Zurab Pololikashvili akamhanya mushandirapamwe unotyisa wezvematongerwo enyika achishandisa kubatana kweEuropean pamwe nekubatika kweMusoro weNyika kusimudzira kukwikwidza kwake. Chirongwa chake chekugadzirisa uye kugadzikana chiri pamusoro pechimiro shanduko inotarisirwa nezvinodiwa nesangano Anonanga iko chaiko / kwekunze chaiko sevamwe vavhoti. Yake "glocal" tarisiro yakakosha kucherechedzwa kwekuwedzera kwenharaunda simba pane ramangwana rekushanya ..
Mumiriri Jaime Alberto Cabal Mumiriri weColombia kuAustria, anozivisa Mutungamiriri wenyika yake sesimba rinosimudzira kukwikwidza kwake uye Latin America sedanho .. Anokakavara zvakakwana nhengo yeUN yakazara nyika yeUNWTO - kubva pa150 kusvika kune mazana maviri uye kunyanya "kukwira mahara." ”Nharaunda yeAnglo-Saxon. Iye anokudza zvakare pamusoro pekuwedzera kubatana pamwe neakazvimiririra uye NGO kufarira kuburikidza nekuwedzera uye kusimudzira kweanobatana. Anodzvanya mabhatani eindasitiri akakodzera pane kuchengetedzeka nekusimba, uye zvinoramba zvichionekwa kuti chiratidzo chake chinopinda zvakadzika zvakadii.
Kunze kwemibvunzo yakamutswa pane levers iri kudhonzwa nemushandirapamwe, mubvunzo chaiwo ndewekuti here munhu ane ruzivo rwakaganhurwa rwehurefu uye huwandu hwezviitiko zveUNWTO, pamwe nehukama hwepasi rose, simba, uye kusasimba, chaizvo kutyaira shanduko inotsigirwa mune inowedzera isina chokwadi nguva.
Uye zvechokwadi, kwandiri, pane iis mubvunzo wakakosha uri pasi - ndeupi wevose vari kukwikwidza, anonyatsoziva kuti kana Climate Change iri eXistential tinoita sei shanduko dzakadzama kuti tibate kuchokwadi ichocho. Nekuti sekutaura kwaNaomi Klein "Izvo Zvinochinja Zvese"
Saka mibvunzo yakawanda. Zvinofadza, tichazoziva mhinduro pakupera kwevhiki.
Muzvinafundo Geoffrey Lipman
mutungamiriri wenyika International Mubatanidzwa weVashanyi Partner (ICTP)